date_range 21 October 2017
visibility 10900 Views
Enrique Bonansea ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား လက်ရှိ ဂျပန်မှာနေထိုင်နေသူ App Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Bonansea နဲ့အတူ ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Software Development ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Emonster k.k. တို့က Apple ကို Trademark မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ California ပြည်နယ် တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ပဲတရားစွဲလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
တရားစွဲဆိုသူ Bonansea က
“Apple အနေနဲ့ “Animoji” ဆိုတဲ့နာမည်က Trademark မူပိုင်ခွင့်တင်ပြီးသားကို သိတယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ App Store ထဲမှာ ကျနော်တို့ Emonster Inc. က ရေးဆွဲထားတဲ့ Animoji - Free Animated Texting ဆိုတဲ့ Social Network App လေးရှိနေတာရယ်၊ ဒီနှစ်နွေမှာတုန်းက “Animoji” ဆိုတဲ့နာမည်ကို ပြန်ရောင်းချဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီအများအပြား ကျနော်တို့ကို လာရောက်မေးမြန်းနေခဲ့တာရယ်ကြောင့်ဗျ”
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောစရာရှိတာက နာမည်မူပိုင်ခွင့်ကို ပြန်ရောင်းဖို့ Bonansea နဲ့ Emonster k.k. ကုမ္ပဏီကို လာရောက်ဆက်သွယ်တာက Apple ကိုယ်တိုင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေ ထုံးစံအတိုင်း ဝယ်ယူဖို့ လာဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး၊ နောက်တော့မှ အဲ့ဒီ့ကုမ္ပဏီကလည်း သူတို့ပိုင်တာမို့လို့ မူပိုင်ခွင့်လည်း သူတို့ရသွားပြီဆိုပြီး လူလည်ကျတာပါပဲ။ ဒီလိုဝယ်တာက သူတို့ Product အသစ်အကြောင်းလည်း အပြင်ကို သတင်းတွေ မပေါက်ကြားတော့ဘူး၊ Apple ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးက ဝယ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် စျေးလည်း အများကြီး ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုဆိုးသွားတာက လာဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့ကို မရောင်းရင် "Animoji" Trademark မူပိုင်ခွင့်ကိုပါ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်တာတွေပါ ရှိခဲ့တယ်လို့ Bonanesea ရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာ Apple ရဲ့ "ဗန်းပြကုမ္ပဏီ" တွေလား ဆိုတာကတော့ သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံပါဘူး။
“Animoji ဆိုတဲ့ Trademark ကို Emonster k.k. က ပိုင်ဆိုင်ထားတာကို သိရှိရဲ့သားနဲ့ Animoji ဆိုတာ Apple က ပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Apple အနေနဲ့ Animoji - Free Animated Texting ဆိုတဲ့ App လေး App Store မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိရှိခဲ့ပါတယ်။ သိနေပြီးသားကိုတောင် Apple အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် Creation မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ September Event မတိုင်ခင် နာမည်ကို အချိန်မီပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် Apple အနေနဲ့ အကျိုးဆက်ကိုမမှုပဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက် “Animoji” ဆိုတဲ့ Trademark ကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်”
လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ တရားစွဲဆိုထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံကိုတော့ ဒီမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Bonansea နဲ့ Emonster k.k. တို့အနေနဲ့ အခုတရားစွဲဆိုမှုမှာ ပြဿနာတစ်ခုလည်း ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Bonansea အနေနဲ့ “Animoji” ဆိုတဲ့နာမည်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Emonster Inc. ကုမ္ပဏီပိုင်နာမည်အနေနဲ့ Trademark မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ U.S Patent & Trademark Office ကနေ မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီက Emonster Inc. ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီ့အချိန်တုန်းက Emonster Inc. ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ California ပြည်နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Bonanesea လည်း ဂျပန်ကို ပြောင်းသွားပြီး၊ အခုမှာတော့ ကုမ္ပဏီနာမည်က Plaintiffs Emonster k.k. နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ကုမ္ပဏီနာမည်မတူတာရယ်၊ ကုမ္ပဏီကို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေ မတူညီတာရယ်ကြောင့် “အခုတရားစွဲဆိုမှုမှာ Emonster Inc. ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ California မှာ မရှိတော့တဲ့အတွက် နာမည်ကိုသုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်” လို့ Apple ဘက်က ချေပခဲ့ပါတယ်။
Emonster k.k. အနေနဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၇ မှာ “Animoji” နာမည်ကို Emonster k.k. ကုမ္ပဏီပိုင် Trademark အနေနဲ့ မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Emonster နဲ့ Bonansea တို့အနေနဲ့ “Animoji” ဆိုတဲ့နာမည်ကို Apple ဘက်ကနေ ဆက်လက်အသုံးမပြုနိုင်အောင် ပိတ်ပင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Lawsuit Apple Copyright Copyright Infringement Animoji